Wararka - mc nylon usheeda dhexe ee caag ah engireening
mc nylon usheeda dhexe ee caag ah engireening
"Caadiga cusub" ee qaar ka mid ah magaalada Alaska ee ugu weyn ay la qabsadeen inay u muuqdaan kuwo aan la gaari karin iyadoo barafku uu ku soo dhacay 20-meeyadii ka hooseeya baraf habeenkii Axadda ee Dalxiiska Anchorage Trail Tour.
Sannad ka hor, heerkulka Anchorage ee ugu hooseeya isla maalintaas wuxuu ku dhawaaday 40 darajo ka sarreeya 21-aad, maalintii sarena wuxuu fuulay 2 darajo oo ka sarreeya barafka.
Anchorage ma urin calaamad baraf ah muddo laba toddobaad ah. Qabowga oo bilaabmay Noofembar 8 ayaa kaliya sii ahaan doona qabow.
Russ wuxuu ku dareemaa cagaha Labrador retriever. Wuxuu ku dhashay dhogor adag, dhogor dufan leh, cagihiisa dhiigga kulul si sahal ah uma baraf. Laakiin heerkulka ka sarreeya 10 darajo eber ka hooseeya, taas oo ku xidhan barta sayaxa, cagahaas ayaa dhalaali doona barafka oo isla markiiba barafoobay oo ku dhex qaboojiyey suulasha dhexdooda.
Waqti dheer, waa hore, kabaha eyda ayaa loo hindisay xaaladdan. Waxaan ahay da 'weyn oo ku filan in aan xasuusto dareewalkii Eyga Idiatod ee Herbie Nayokpuk, aka Shishmaref Cannonball, oo muujinaya shay ka samaysan harag shaabad ah oo jiilba jiil ay u gudbinayeen awoowyaashiis.
Haddii uu waligiis isticmaalay, ma aqaano. Marka lagu arko waddooyinka ay shuruudaha dalbadeen kabo ee 198-meeyadii, eygiisu had iyo jeer wuxuu xidhnaa naylon jaban oo la bixin karo ama kabo cufan oo la mid ah sida eeyaha qof kasta oo kale.
Russ wuxuu isticmaali karaa nooc kasta oo booties ah, laakiin uma maleyneynin inuu keeno iyaga. Waxay u muuqataa waqti dheer tan iyo markii loo baahnaa, laakiin mar kale, ma aysan aheyn waqti dheer.
Ku qanacsanaanta la qabsiga iyo qallafsanaanta maskaxda bini'aadamka. Waxaan si degdeg ah ula qabsanaa xaaladdii dhoweyd sidii ay weligeed ahaan jirtay.
Haddi ay dadku aqbaleen jiilaalka Anchorage's Seattle-u eg kan caadiga ah iyo in kale, dadku waxay rabaan in jiilaalka cusub uu ahaado sidii sanadkii hore.
2019 waxa uu ahaa sanadka ugu diiran ee taariikhda Alaska, waxana uu sii socday horraantii 2020. Sannadka cusub ee 2019, heer kulku magaaladu waxa uu ahaa 45 digrii oo roob baa da’ay, in kasta oo heerkulku si xawli ah hoos ugu dhacay maalintii xigtay, 2020 waxa uu ahaa mid xad dhaaf ah. khafiif ah.
Xarunta Cimilada ee Alaska ayaa sheegtay in celceliska heerkulka sanadkan uu 0.4 digrii ka kululaaday celceliska sannadihii 1981 ilaa 2010, laakiin waxa ay xustay in "2020 uu aad uga hooseeyey toddobadii sano ee hore" ee gobolka.
Dad yar ayaa ogaa in tani ay tahay bilawga isbeddelka. Adeegga Cimilada Qaranka ayaa sheegay in Anchorage ay ka hooseyso 1.1 darajo celceliska sanadka oo dhan wakhtigan, iyo in kulayl badan aan la saadaalin karin waqti dhow.
Heerkulka ayaa la filayaa inuu kor u kaco laba nambar oo ka sarreeya eber maanta, laakiin u jihayso laba nambar ka hooseeya eber mar labaad dhammaadka usbuuca.
Haddii tani ay tahay isbeddelka xilliga kuleylka caalamiga ah - meeraha guud ahaan wuu sii kululaanayaa - ama bilawga isbeddelka muddada dheer ee Alaska hore, qofna ma sheegi karo.
Laakiin waxaa jira calaamado muujinaya in caadigii hore uu soo laaban karo in muddo ah. Pacific Decadal Oscillation (PDO), garaaca garaaca Gacanka Alaska, ayaa qaboojiyey.
Polar Vortex iyo Arctic Oscillation, ayaa ku qoray boggiisa usbuucii hore.” Waxaan u maleynayaa inay gacan ka geysatay kor u kaca xeebta ee ka socday bariga Waqooyiga Ameerika intiisa badan tobankii sano ee la soo dhaafay ama xeebta galbeed ee Waqooyiga Ameerika.Si kastaba ha ahaatee, fikradda ah in heerkulka dusha sare ee badda uu saameeyay wejiga iyo baaxadda hirarka troposphere waa mid ka fog gabagabada.”
Biyo-mareenadan iyo mowjadahan-dhab ahaantii ku rogmanaya jawiga-waxa ay carqaladeeyaan socodka hawada ee galbeed-ilaa-bari ee ku wareegsan dhulka marka ay dhex wareegayso hawada sare.
Dabaysha joogtada ah ee koonfur-galbeed-ilaa-waqooyi-bari waxay qaadaysaa hawo diirran oo ka timaada Badweynta Baasifigga waxayna u sii gudbisaa waqooyiga Alaska, iyada oo ay ugu wacan tahay waxa loo yaqaan "Pineapple Express."
Maamulka Badweynta iyo Cimilada Qaranka (NOAA) ayaa dhacdadan ku tilmaamay "wabiyada jawiga." Jiilaalkii dhawaa, wabigu inta badan wuxuu ka da'ay Alaska.
Cohen waxa uu caddeeyey in ka badan inta badan marka la saadaaliyo waxa ay ka dhigan tahay, waxana uu damcay khamaarkiisii ​​usbuucii hore. Xarunta Saadaasha Cimilada ee Maraykanka ayaa sheegtay in heerkulka magaalada hoose ee Alaska uu caadi ka hoosayn karo bilaha December, January iyo February.
Barafka jecel ee Anchorage - waxaa jira qaar badan oo iyaga ka mid ah - laga yaabaa inay u maleynayaan in tani ay tahay shay wanaagsan, laakiin Xarunta Cimiladu waxay sidoo kale saadaalisay in ka hooseeya barafka caadiga ah ee koonfurta ee Buuraha Talkeetna iyo Kenai Peninsula.
Weli, roobabka ayaa la filayaa in ay ku soo dhawaadaan sidii caadiga ahayd hal maalin gudaheed oo loo wado waqooyi ee aagga metro ee Anchorage, sida haddii wax caadi ah Alaska.
Ku Tagged: #cimilada isbeddelka, #globalmaring, ADN, Alaska, Cohen, Qabow, Adeegga Cimilada Qaranka, NOAA, Talaajad Seward
Sawirkaagu muujinaya $2.42 gallonkiiba waa hubaal Alaska duqoobay…laga yaabee xitaa ka hor-Fred Meyer ama ka hor tuubooyinka.
Qiimaha gaaska Anchorage wuxuu hoos uga dhacay $2 gallon gugii 2020: https://www.anchoragepress.com/bulletin/gas-prices-in-anchorage-up-2-4-cents-this-week/ article_1faaf136-993d-11ea -9160-ffb0538b510a.html
Haddii aan si sax ah u xasuusto (ma rumaysni sababtoo ah waa sababta aan kor ugu xidhay), Costo wuxuu hoos ugu dhacayaa $1.75 gallon. Waxaan xusuustaa buuxinta dhammaan mishiinnada guriga. xagaagan.
Hi Craig, waxaan adiga iyo qoyskaagaba u rajaynayaa farxad, caafimaad iyo farxad Thanksgiving. Waad ku mahadsan tahay shaqada adag ee aad ka qabto goobtan muhiimka ah. Dhammaan waa wanaagsan yihiin, Marin
Ma haysano wax caadi ah halkan, taasi maaha waxa aan sameyno bisha kaliya baraf ma haysto, haddii aan aado meesha saxda ah (qaldan), waxaan hubaa inaan hagaajin karo sanadka soo socda.
Aasaasaha kanaalka cimiladu, John Coleman, ayaa ku tilmaamay kulaylka caalamiga ah been abuur.Wuxuu sheegay inay heleen awood aad u badan oo waxa kaliya ee dumin lahaa ay tahay jiilaal aad u daran. ee buundada si dad badan ay ugu raaxaystaan ​​si ammaan ah.
CIRI waxay leedahay jasiiradda Fire Island. Mishiinnada dabayshu waxay qayb ka yihiin qorshe-xun oo lagu riixayo kaabayaasha jasiiradda. Dhibaatadooda ayaa ah inay si degdeg ah ugu guuleysteen $$$ 8da cutub ee ugu horreeya. Wajiga 2 iyo 3 waa la qorsheeyay, laakiin aan weli la dhisin. Taas macnaheedu maaha in haddii ay lacag samayn karaan, ay weli diyaar u yihiin inay sameeyaan.
Habka kale ayaa ah in la sameeyo xarun cilmi baaris tamarta ah oo ku taal Island Fire oo loogu talagalay in lagu horumariyo hababka tamarta caadiga ah ee cabbirka Bush. Kadib waxay helayaan marmarsiiyo si ay ugu xiraan wax soo saarka shabakada Tareenka, rakibidda buundooyinka/wadooyinka, iyo horumarinta inta soo hartay. dhul oo ka iibi guryaha iyo meheradaha. Laakin waxay ku socdaan xal degdeg ah, taas oo ilaa hadda ka hor istaagtay wax kasta oo kale.
Runtii waa wax cajiib ah, waxaan ula jeedaa runtii cajiib ah, sida ay u khiyaano badan yihiin iyo nacasnimada malaayiin qof - kulaylka caalamiga ah, "isbedelka cimilada", "Covid" dhammaanteen waan dhiman doonnaa" maskax-dhaqidda, dhammaan Rittenhower Stuff, Kavanaugh, Ruushka iyo Yukreeniyaan iskaashi, Hunter waa nin ganacsade ah oo ku fadhiya boodhka Shiinaha isagoo ku iibinaya sawirradiisa $ 500,000 / gabal, ama been BLM, iwm … ah sug…
Kabaha eyga dhaladka ah ee dhaladka ah ayaa dhaqan ahaan loo isticmaalaa masaafo gaaban marka la ugaarsanayo ama safrayo. Weligood looguma talagalin in ay geliyeen todobaatan mayl maalin iyo maalinba (maxaa yeelay maalin ka mid ah Herbie waxay ku saabsan tahay maalin kasta oo Iditarod ah.) Herbie wuu ogaa in xitaa kan ugu jilicsan. Harag madoobayn ah ayaa ka tagaysa gacanta eyga ee Xargaha hoostooda ee maqaar-jiidashada maalintii oo dhan. Markaa waxay isticmaaleen maro jilicsan iyo dhogorta.
Craig, laga bilaabo xagaaga dambe, wuxuu rajeynayaa 70% fursad jiilaalka La Niña inta lagu jiro jiilaalka iyo gu'ga (oo leh roob wax ka yar hal bil iyo qoryo qoyan) ma hubo sida uu u dhammaan doono, laakiin dhowrkii sano ee la soo dhaafay ayaa la arkay dhamaadka cajiibka ah ee baraf da'ay.
Geli ciwaankaaga iimaylka si aad ula socoto Craigmedred.news oo aad iimaylka ugu hesho ogaysiisyada sheekooyinka cusub.
Waqtiga boostada: Mar-15-2022